जागिर छाडेर १५ लाखमा सुरू गरिन् कपडा व्यवसाय, विदेश पनि पठाउँदै :: जुना श्रेष्ठ :: Setopati
अर्ती लाखे जोशी आफ्ना छोरासँग।
अर्ती 'काप क्रिएसन्स' की सञ्चालक हुन्। काप क्रिएसन्स यस्तो ठाउँ हो जहाँ घरायसी प्रयोजनका कपडा, जस्तै तन्ना, सिरानीको खोल, खास्टो, तौलियालगायत कपडाहरू पाइन्छ। यी सबै नेपालमै बनेका हुन्।
'जागिरमा आफूले भने जस्तो हुन्थेन। त्यसैले आफ्नै केही गर्ने सोचेँ,' काप क्रिएसन्स सञ्चालनको आइडियाबारे उनी भन्छिन्, 'घरको हरेक कुनामा कपडा हुन्थ्यो। बरू यसैमा केही रचनात्मक काम गरेर व्यवसाय गर्ने सोचेँ।'
अर्तीले सोचिन्, 'त्यत्रो अस्पतालका खाटहरूमा चाहिने तन्ना र सिरानी खोल बनाउने जिम्मा कसले लियो होला? बुझेर हेर्छु! अनि काप क्रिएसन्सबाट बनाउने प्रस्ताव राख्छु।'
'उहाँहरूको ध्यान कम गएको विषय हुनाले पनि मेरो प्रस्ताव मन पराउनुभयो। तन्ना र सिरानी खोलसँगै डाक्टर, नर्स र बिरामीलाई लगाउने लुगा बनाउने जिम्मा लियौं,' उनले पहिलो कामबारे भनिन्। यसरी काप क्रिएसन्सले आधिकारिक रूपमा २०७४ वैशाखदेखि काम थाल्यो।
'नेपाली कपडा पनि यस्तो राम्रो भन्ने थुप्रै ग्राहक हुनुहुन्छ,' अर्तीले भनिन्, 'अझै पनि नेपालमा बनेको कपडा वा कुनै सामग्री कम गुणस्तरको हुन्छ भन्ने सोचाइ छ। जुन एकदमै गलत हो। काप क्रिएसन्समार्फत नेपालमा उत्पादित कपडा पनि गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने बुझाउँदै छौं।'
'कतिपय आफैं सोध्दै आउनुहुन्छ, कतिपयकहाँ भने हामी आफैं सामग्री लिएर पुगेका छौं। यसले हामीबीच सम्बन्ध बनाउनुका साथै ब्रान्डिङमा पनि मद्दत पुर्‍याएको छ,' उनले भनिन्।
'काप' नेपाल भाषाको शब्द हो। यसले कपडा भन्ने अर्थ दिन्छ। अर्तीका अनुसार कपडा सम्बन्धी रचनात्मक काम हुनाले व्यवसायको नाम काप क्रिएसन्स राखिएको हो। यो नाम उनलाई श्रीमान निरन्जन जोशीले सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूको विवाह भएको पाँच वर्ष भयो। दुई वर्षका छोरा समेत छन्।
'आफूलाई मन लागेको काममा हात हाल्दा परिवार रिसाउँछन् भन्ने हुँदैन। ढिलो-चाँडो सबैले साथ दिनुहुन्छ,' उनले भनिन्।
'वेबसाइट भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी बजारसम विस्तार गर्न सहज हुन्छ भन्ने छ,' उनी दीर्घकालीन योजनाबारे भन्छिन्, 'काप क्रिएसन्समार्फत नेपालमा उत्पादित कपडा विदेशमा चिनाउने योजना छ। यसलाई नेपाली ब्रान्डका रूपमा विस्तार गर्नुछ।'
नतिजाभन्दा कामको गति र वर्तमान प्रक्रियामा विश्वास राख्ने अर्ती मानिसमा जोस भए जुनकुनै काममा सफलता पाइने बताउँछिन्। उनले जागिर छाडेर नयाँ व्यवसाय गर्दा 'भोलि के होला?' भन्ने कहिल्यै सोचिनन्। जोसका साथ प्रक्रियामा विश्वास राखिन्। बजारमा काप क्रिएसन्सलाई विस्तार गर्ने उनको जोस रत्ति कम भएको छैन।
'मैले व्यापारका लागि नभएर आफ्ना लागि व्यवसाय थालेँ। हालसम्म ग्राहकको प्रतिक्रिया सकारात्मक छ। त्यसमै सन्तुष्टि मिल्छ,' अर्तीले भनि्, 'आफूलाई जे गर्न मन छ त्यसमै केन्द्रित भए सफलता र सन्तुष्टि दुवै पाइन्छ।'
(काप क्रिएसन्सको फेसबुक र इन्स्टाग्रामका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्कः ०१-५१८१०८२)
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २४, २०७८, १९:२५:००